Location: Mbido » Ịdee » Ozi waya » Akụkọ ọhụrụ gbasara mgbaàmà abalị na arụrụ ọrụ ehihie na ndị okenye nwere ehighi ura
Idorsia Pharmaceuticals, US Inc. taa mara ọkwa mbipụta nke "Nchekwa na nrụpụta ọrụ nke daridorexant na ndị ọrịa nwere nsogbu ehighị ụra nke ọma: nsonaazụ sitere na multicenter abụọ, randomized, okpukpu abụọ kpuru, ebe a na-achịkwa ebebo, ule nke 3" na Lancet Neurology.
Daridorexant 25 mg na 50 mg na-eme ka ụra dịkwuo mma, na daridorexant 50 mg na-eme ka ọrụ ụbọchị dịkwuo mma, na ndị nwere nsogbu ehighi ura, na profaịlụ nchekwa dị mma. Ọnụ ọgụgụ niile nke ihe ọjọọ dị n'etiti otu ọgwụgwọ na ndị okenye na ndị okenye (ndị dị afọ 65 na karịa) nwere ehighi ura. Dị ka a na-akọ, daridorexant 50 mg gosipụtara ọganihu dị ịrịba ama na isi njedebe nke mmalite ụra na mmezi yana njedebe nke abụọ nke ngụkọta oge ụra na ụra ehihie.
N'ụzọ dị mkpa, ule ndị ahụ bụ ndị mbụ iji nyochaa mmetụta nke ọgwụgwọ ehighị ụra nke ọma na-arụ ọrụ ehihie, na-eji ngwá ọrụ nyocha nke onye ọrịa kwadoro, nke gụnyere ngalaba atọ dị iche iche (ọmụma / cognition, ọnọdụ, na ụra). Daridorexant 50 mg, nke a na-enyocha n'ime otu n'ime ule abụọ ahụ, gosipụtara ọganihu ma e jiri ya tụnyere ntọala n'ofe ọrụ ụbọchị niile na-arụ ọrụ na ọkwa dị elu.
Emmanuel Mignot, MD, Prọfesọ nke Psychiatry na Behavioral Sciences na Mahadum Stanford na onye edemede, kwuru:
“Ndị nwere ehighị ụra nke ọma na-emekarị mkpesa na ha adịghị arụ ọrụ ehihie. Nke a bụ isi okwu a na-elegharakarị anya na ọgwụgwọ ehighị ụra nke ọma na n'ezie ọtụtụ ọgwụ na-akwalite ụra nwere ike imebi ọrụ ụbọchị mgbe ha nwere mmetụta ndị fọdụrụnụ. N'ime mmemme a, ọ bụghị naanị na anyị na-ahụ nrụpụta nke daridorexant na ntinye ụra, nlekọta na ọnụ ọgụgụ nke ụra na ịdị mma nke ndị ọrịa, ma ọ dị mkpa, na dose nke 50 mg, na-arụ ọrụ ehihie, karịsịa na ngalaba ụra dị ka atụle ya na ọhụrụ. Ọnụ ego, IDSIQ. Ndị na-esonye na daridorexant 50 mg otu kwuru mmelite n'ọtụtụ akụkụ nke ịrụ ọrụ ụbọchị, dị ka a na-enyocha site na ngwá ọrụ ọhụrụ a mepụtara na nke kwadoro nke na-enyocha ọnọdụ, njikere / nghọta, na ụra. Ọ bụ ihe na-akpali akpali ịhụ na n'ikpeazụ, ọ bụghị nanị na a na-ele ehighị ụra nke ọma anya dị ka nsogbu nke abalị kama dị ka ihe na-akpata nhụjuanya ehihie.”
Ịrụ ọrụ yana nsonaazụ nchekwa
Daridorexant 50 mg budata mma mmalite ihi ụra, nlekọta ụra na ịkọ onwe ya ngụkọta oge ụra na ọnwa otu na atọ ma e jiri ya tụnyere placebo. A na-ahụ mmetụta kachasị ukwuu na usoro kachasị elu (50 mg), na-esote 25 mg, ebe dose 10 mg enweghị mmetụta dị ukwuu. N'ime otu ọgwụgwọ niile, a na-echekwa oke nke oge ụra, n'adịghị ka nchoputa a kọrọ na benzodiazepine agonists receptor.
Isi ihe na-elekwasị anya n'ule ndị ahụ bụ iji nyochaa mmetụta nke daridorexant na-arụ ọrụ ehihie na ndị ọrịa nwere ehighị ụra nke ọma, dị ka nyocha nke Insomnia Daytime Symptoms and Impact Questionnaire (IDSIQ). IDSIQ bụ ngwa nrụpụta onye ọrịa akwadoro nke emepụtara dịka ntuziaka FDA siri dị, gụnyere ntinye onye ọrịa, iji tụọ ọrụ ụbọchị n'ime ndị ọrịa nwere ehighi ura. A tụlere akara ngalaba ihi ụra nke IDSIQ dị ka isi ihe njedebe nke abụọ na ọmụmụ ihe dị mkpa yana ntụnyere placebo gụnyere njikwa maka ịba ụba. Daridorexant 50 mg gosipụtara mmụba dị ukwuu nke ọnụ ọgụgụ dị ukwuu na ụra ehihie na ọnwa otu na ọnwa 3. Achọpụtaghị akara ngalaba ụra nke ọma na 25 mg na ọmụmụ ọ bụla n'oge ọ bụla. Daridorexant 50 mg kwalitekwara akara ngalaba IDSIQ ọzọ (ngalaba njikere / cognition, ngalaba ọnọdụ) na akara ngụkọta (p-ụkpụrụ <0.0005 na placebo adịghị edozi maka ịba ụba). Mmelite na arụ ọrụ ehihie site na daridorexant 50 mg ji nwayọọ nwayọọ na-abawanye n'ime ọnwa atọ nke ọmụmụ ahụ.
Ọnụ ọgụgụ niile nke ihe ọjọọ dị n'etiti otu ọgwụgwọ. Ihe ọjọọ na-eme na ihe karịrị 5% nke ndị sonyere bụ nasopharyngitis na isi ọwụwa. Enweghị mmụba dabere na dose na mmemme ọjọọ n'ofe usoro onunu ogwu, gụnyere ihi ụra na ọdịda. Ọzọkwa, ọnweghị ndabere, nkwụghachi azụ ehighị ụra nke ọma ma ọ bụ mwepu mmetụta a hụrụ na nkwụsị nke ọgwụgwọ na mberede. N'ofe ndị otu ọgwụgwọ, ihe ọjọọ na-eduga na nkwụsị ọgwụgwọ na-ejikarị placebo karịa darídorexant.
Martine Clozel, MD, na Onye isi Sayensị Sayensị nke Idorsia, kwuru:
"Nkọwa ndị a e bipụtara na The Lancet Neurology na-egosipụta omimi nke ihe akaebe na-eme na mmemme mmepe nke daridorexant na njirimara ọgwụ nke m kwenyere na-akọwa nsonaazụ ya. Emebere ọgwụ ahụ ka ọ nwee ọrịre maka mmalite ihi ụra yana nrụzi na usoro kachasị mma ma na-ezere ihi ụra ụtụtụ fọdụrụnụ. Profaịlụ a, yana nchikota nha nke ma ndị na-anabata orexin - nke nwere ike iduga na mgbochi nke njirimara hyperactivity na-adịghị ala ala nke ehighi ura - nwere ike ịkọwa mmelite anyị na-ahụ na arụ ọrụ ehihie na 50 mg nke daridorexant.
Daridorexant na ehighi ura
Ihe e ji mara nsogbu ehighị ụra nke ọma bụ ihe isi ike ịmalite ma ọ bụ ịnọgide na-ehi ụra na-ejikọta ya na nhụjuanya ma ọ bụ adịghị arụ ọrụ n'ehihie. Mkpesa dịgasị iche iche nke ehihie, site na ike ọgwụgwụ na ike belata ruo mgbanwe ọnọdụ uche na ihe isi ike nke ọgụgụ isi, bụ ndị nwere ehighi ura na-akọ.
Ejikọtara ehighị ụra nke ọma na usoro ịkpọte nke ukwuu.
Daridorexant, akwụkwọ akụkọ dual orexin antagonist, bụ nke Idorsia mere ma mepụta maka ọgwụgwọ ehighị ụra nke ọma. Daridorexant na-elekwasị anya n'ichepụta oke ịmụrụ anya nke ehighi ura site na igbochi ọrụ orexin. Daridorexant na-elekwasị anya na usoro orexin site n'ịsọ mpi na ndị na-anabata ya, si otú a na-egbochi ọrụ orexin.
Daridorexant bụ FDA kwadoro na US n'okpuru aha ahia QUVIVIQ ™ na ọ ga-adị na-esote nhazi oge nke US Drug Enforcement Administration na Mee 2022.
Ọzọ na: Drug | Ọchịchị Ime Ngwá Agha
Ngwa ọgwụ ọhụrụ maka ọgwụgwọ dị oke njọ nke Migraine Drug|
Na-egbu oge ọganihu na dementia Alzheimer Drug|
FDA kwadoro Ọnwụnwa Ọrịa Ọrịa iku ume siri ike Drug|
Drug Ọchịchị Ime Ngwá Agha